Ikpe ziri ezi bụ ihe n'ịhụ na ize ndụ na abamuru nke nnyocha na-ekesa n'ụzọ ziri ezi.
The Belmont Report na-arụ ụka na ụkpụrụ nke Ikpe ziri ezi na-akọwa nkesa nke ibu na uru nke nnyocha. Nke ahụ bụ, ọ gaghị abụ ikpe na otu otu n'ime ọha mmadụ na-akwụ ụgwọ nke nchọpụta mgbe ndị ọzọ na-aghọrọ uru ya. Dịka ọmụmaatụ, na narị afọ nke iri na itoolu na mmalite nke iri abụọ na iri abụọ, ibu arọ nke ije ozi dị ka ihe ọmụmụ na-ahụ maka ọnwụnwa ahụike dara n'ụzọ dara ogbenye, ebe ọ bụ na ndị bara ọgaranya na-erite uru maka nlekọta ahụike dị mma.
Na omume, ụkpụrụ nke ikpe ziri ezi bu ụzọ kọwaa ka ọ bụrụ na ndị nchekwa nwere ike chebe ya pụọ ​​n'aka ndị nchọpụta. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, a ghaghị ikwe ka ndị na-eme nchọpụta kwe ka ha jiri aka ha na-eri ihe na-enweghị ike. Ọ bụ ihe nhụsianya na n'oge gara aga, ọtụtụ nchọpụta nsogbu nke nsogbu na-emetụta ndị na-enweghị ike ịbanye, gụnyere ụmụ amaala na-enweghị akwụkwọ na ndị na-enweghị ihe ọmụma (Jones 1993) ; ndị mkpọrọ (Spitz 2005) ; ụmụaka enwere nkwarụ, (Robinson and Unruh 2008) ; na ndị agadi na debilitated ụlọ ọgwụ (Arras 2008) .
Na 1990, Otú ọ dị, echiche banyere Ikpe Ziri Ezi malitere ịgbapụta site na nchebe iji nweta (Mastroianni and Kahn 2001) . Dịka ọmụmaatụ, ndị ọrụ mgbasa ozi kwusiri ike na ụmụaka, ụmụ nwanyị, na agbụrụ dị iche iche chọrọ ka a kọwapụta ha n'ụzọ doro anya n'ime ule ndị nwere nsogbu ka òtù ndị a nwee ike irite uru site na ihe ọmụma ndị a nwetara (Epstein 2009) .
Na mgbakwunye na ajụjụ gbasara nchebe na ohere, a na-akọwakarị ụkpụrụ ikpe ziri ezi iji jụọ ajụjụ banyere ụgwọ kwesịrị ekwesị maka ndị na-eso-ajụjụ ndị na-agbaso arụmụka siri ike na ụkpụrụ ahụ ike (Dickert and Grady 2008) .
Ime ka ụkpụrụ nke ikpe ziri ezi nye ihe atụ atọ anyị nyere ụzọ ọzọ iji lelee ha anya. Ọ dịghị nke ọ bụla n'ime ọmụmụ ndị ahụ bụ ndị na-akwụ ụgwọ ego. Encore na-eme ka ajụjụ ndị dị mgbagwoju anya gbasara ụkpụrụ ikpe ziri ezi. Ọ bụ ezie na ụkpụrụ Beneficence nwere ike ịsị na ịhapụ ndị sitere na mba ndị nwere ọchịchị nchịkwa, ụkpụrụ nke Ikpe ziri ezi nwere ike ịrụ ụka maka ikwe ka ndị a banye na-na-erite uru site na - nha nha nke ntinye aka n'Ịntanet. Okwu gbasara Ọkụ, Ties, na Time na-ewetakwa ajụjụ n'ihi na otu ìgwè ụmụ akwụkwọ na-eburu ibu arọ nke nchọpụta ahụ, ọ bụ naanị ọha mmadụ ka ọ baara uru. N'ikpeazụ, na Emotional Contagion, ndị nabatara ibu ọrụ nke nchọpụta ahụ bụ ihe omimi nke ndị bi na ya ga-erite uru site na nsonaazụ (ya bụ, ndị ọrụ Facebook). N'echiche a, ebumnuche nke Contagion Emotional kwekọrọ na ụkpụrụ nke Ikpe ziri ezi.